TRF အားဖြင့်သုတေသန | ဆုလာဘ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ: မေတ္တာသည်လိင်နှင့်အင်တာနက်
ပင်မစာမျက်နှာ ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း TRF အားဖြင့်သုတေသန
အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှမှာအဖွဲ့သည်ဗြိတိန်နှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံတို့တွင်မိတ်ဖက်တွေနဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေပါတယ်။ ကျနော်တို့ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်မှ neuroscience ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်လက်တွေ့ setting တွင်စွဲကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ကြတချို့မူရင်းသုတေသနဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအားလုံး peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဂျာနယ်များ၌တည်ရှိ၏။
Mary Sharpe နှင့် Darryl Mead တို့သည် Springer ဂျာနယ်၏လက်ရှိစွဲလမ်းမှုအစီရင်ခံစာများကိုရေးသားရန်ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရသည် ပြဿနာညစ်ညမ်းပုံအသုံးပြုနည်း: ဥပဒေနှင့်ကျန်းမာရေးမူဝါဒထည့်သွင်းစဉ်းစားပါမရ။ ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအသုံးပြုခြင်းကအမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးများအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကိုဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်သလဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့စိတ်ကူးသစ်တွေရှာဖွေပါ။ PPU ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုကာကွယ်ရန်နှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားမှုကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်နိုင်သောကျန်းမာရေးမူဝါဒဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများနှင့်တရား ၀ င်လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်အစိုးရများအားလမ်းညွှန်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ယိုကိုဟားမားစာတမ်းတစ်ခုမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည့်ရွယ်တူချင်းပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ဂျာနယ်တွင်ယခုထုတ်ဝေသည်။ စက္ကူက “ ဥရောပသုတေသနကွန်ယက်အတွက်ကြေငြာချက်ကိုအင်တာနက်ပြaticနာများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ချိန်ညှိခြင်း" ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများပြofနာအားအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ထိခိုက်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်စားသုံးသူအသိုင်းအဝိုင်းများ၏မတူကွဲပြားသောလိုအပ်ချက်များနှင့်အတူ။ နောက်လာမည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းလိုအပ်သောသုတေသနအတွက် TRF ၏အကြံပြုချက်များကိုဖော်ပြထားသည်။ နက်ရှိုင်းသော အကွောငျးအရာ စက္ကူပေါ်မှာဒီမှာပါ။
၂၀၁၁ ဇွန်လတွင် TRF သည်ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ယိုကိုဟားမားမြို့၌ကျင်းပသော ၆ ကြိမ်မြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံတွင်တင်ပြခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အပိုင်းအတွက်ပူးတွဲစာတမ်းများနှစ်ခုကယ်နှုတ်တော်မူ၏ Hypersexual အပြုအမူနှင့်အခြားအလွန်အကျွံအပြုအမူတွေ။ Mary Sharpe ကပြောတယ် အမူအကျင့်စွဲလမ်းပေါ်တွင်သုတေသနအကြောင်းကိုသင်ကြားရေးကျောင်းမှာကျောင်းသားများ၏စိန်ခေါ်မှုများ။ Darryl Mead ကမ်းလှမ်းခဲ့သည် ညစ်ညမ်း၏ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ထိခိုက်ဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်စားသုံးသူအသိုင်းအဝိုင်းများ၏မတူကွဲပြားလိုအပ်ချက်နှင့်အတူအင်တာနက်ပြဿနာအသုံးပြုမှုသို့ဥရောပသုတေသနကွန်ယက်ကိုများအတွက်ကြေညာစာတမ်း align လုပ်ဖို့.
ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ဝေဖြစ်ပါသည် ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အပြုအမူစွဲပေါ်တွင် 5th အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံမှာလိင်သုတေသနစာတမ်းများ။ ဒါကကွန်ဖရဧပြီလ 2018 အတွက် Cologne, ဂျာမနီကျင်းပခဲ့သည်။ အဆိုပါစက္ကူတွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည် လိင်စွဲလမ်းနှင့် compulsive 18 မတ်လ 2019 အပေါ်အွန်လိုင်း။ ကျနော်တို့အပေါ်ထုတ်ဝေဗားရှင်း link တစ်ခုပေးနိုင်ပါသည် တောင်းဆိုချက်ကို။ လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်တဲ့မူကြမ်းမိတ္တူထံမှရရှိနိုင် ResearchGate.
Cologne ကနေညီလာခံအစီရင်ခံစာဤမြေကွက်၌ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးတင်ဆက်မှုထောက်ပြသည်။ ဒါဟာအပေါ်ခဲ့သည် ကျယ်ပြန့်ပရိသတ်တွေဖို့ဘာစွဲ၏သိပ္ပံဆက်သွယ်။
အပျေါမှာတညျဆောကျဤစာတမ်း ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အပြုအမူစွဲပေါ်တွင် 4th အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံမှာလိင်သုတေသနစာတမ်းများ။ ဒါဟာထုတ်ဝေခဲ့သည် လိင်စွဲလမ်းနှင့် compulsive ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင်အွန်လိုင်းတွင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အတွဲ ၂၄၊ နံပါတ် ၃၊ ၂၀၁၇ တွင်ပုံနှိပ်ထားသည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်စိတ္တဇအပါအ ၀ င်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား TRF ဘလော့။ သင်ဤဆောင်းပါး၏တစ်ဦးမိတ္တူလိုပါလျှင်ကို ဖြတ်. စာရေးဆက်သွယ်ပါ Touch ကိုအတွက် Get ဒီစာမျက်နှာ၏အောက်ခြေတွင်။
အင်တာနက်က Flow မော်ဒယ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူ
Reward Foundation ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Mary Sharpe သည် Lucy Faithfull ဖောင်ဒေးရှင်းမှစတိဗ်ဒေးဗစ်နှင့်တွဲဖက်ရေးသားခဲ့သည်။ ၎င်းကို“ အင်တာနက်စီးဆင်းမှုပုံစံနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှု” ဟုခေါ်သည်။ အဆိုပါအခန်း၌ထင်ရှား၏ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အလုပ်လုပ်: Practitioner များအတွက်လမ်းညွှန်။ ၎င်းကို ၂၀၁၇ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် Routledge မှထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ၀ ယ်ယူနိုင်သည် ဒီမှာ။ သင်တစ် ဦး ကိုလည်းဖတ်နိုင်သည် အကွောငျးအရာ အဲ့ဒီအကြောင်း။
ဒေါက်တာ Darryl Mead၊ The Reward Foundation ဥက္ကChair္ဌသည်“လူငယ်များသည်အန္တရာယ်များကို Porn Consumerers များအဖြစ်ရင်ဆိုင်ကြရသည်။ ဒါကထုတ်ဝေခဲ့သည် Addicta: စွဲ၏တူရကီဂျာနယ် နှောင်းပိုင်းတွင် 2016 နှင့်အပြည့်အဝစာသားထဲမှာအခမဲ့ရရှိနိုင်ပါသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်သြဂုတ်လတွင် The Reward ဖောင်ဒေးရှင်းမှဂုဏ်ထူးဆောင်သုတေသနအရာရှိဂယ်ရီ Wilson အား“ အမူအကျင့်သိပ္ပံ” ဂျာနယ်တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း"ဟုအဆိုပါကနေလွတ်လပ်စွာရရှိနိုင် အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ က်ဘ်ဆိုက်။ ဒါကဖြစ်ပါသည် လူကြိုက်အများဆုံး စက္ကူအစဉ်အဆက်ထုတ်ဝေ အပြုအမူသိပ္ပံ၌တည်၏။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအန္တရာယ်နယ်ပယ်တွင်အနာဂတ်သုတေသနပြုရန်လမ်းညွှန်ချက်ပေးသောအဓိကစာတမ်းကိုလည်း Gary Wilson ကရေးသားခဲ့သည်။ ဟုတ်တယ် “ ၎င်း၏ဆိုးကျိုးများကိုဖော်ပြရန်နာတာရှည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပါ” နှင့်ထုတ်ဝေခဲ့သည် Addicta, စွဲ၏တူရကီဂျာနယ်, 2016 ၌တည်၏။ အဆိုပါ link ကိုအပြည့်အဝလေ့လာမှုအခမဲ့ access ကိုပေးသည်။